Kedu ihe bụ SEO na Marketing Atụmatụ?
Marketing na ebumnuche bụ maka ijikọta SEO na ọdịnaya. Mgbe a gwakọtara ya nke ọma, SEO na ahịa ọdịnaya dịka ngwá agha a na-apụghị imeri emeri nke na-enyere gị aka ịzụ ahịa site na ìgwè ndị asọmpi.
Na 2017, nzute na ịgbanwere ihe ndị ahịa chọrọ bụ ihe niile na-eme ka akara gị anya, na-eme ka ndị ahịa nwee mmasị ma na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-enwe mmasị iche na nhọrọ ha dabeere na eziokwu na mgbagha, mmetụta uche ka na-ekere òkè dị mkpa n'ịme mkpebi kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na-echetara ahụmahụ, ọ bụghị ederede. Ọ bụ ya mere ịmepụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị na-ege gị ntị na-eme ka ị nwee ike ijikọ aka.
Ọdịnaya bụ ihe mbụ nke SEO Marketing Strategy
N'ime afọ ole na ole gara aga, ịzụ ahịa n'ịntanetị aghọwo otu n'ime ụzọ ndị kachasị amasị ịzụta. Nke ahụ bụ isi ihe kpatara eji eme ka ọdịnaya weebụ gị dịkwuo oke ka o kwere omume itinye aka ma dọta ndị nwere ike ịme ahịa n'ebe ọ bụla. Ọ dabara nke ọma, ị nwere ike iru nke a site na ijikọta SEO na ịzụ ahịa ahịa ahịa n'ime otu ọrụ.
Cheta, njikwa njikwa search engine dị oké mkpa maka nchọpụta ọdịnaya. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịmata isiokwu ndị na - eme ka ebumnobi azụmahịa. Ihe omuma a ga enyere gi aka ighota ebum n'uche nke ndi ahia nke, n'aka nke ya, ga enyere gi aka igbasa ihe odide mbu nke kariri igbanwe.
Olee otu esi ejikọta SEO na ahịa ahịa?
Buru n'uche: ịmepụta usoro ihe omimi kachasị mma na-ewe oge na mgbalị. Ndị ọkachamara dị elu na-atụ aro na ị na-atụle usoro ndị a mgbe ị na-eme atụmatụ atụmatụ kachasị mma nke ọdịnaya gị:
Ịmara na ndị na-ege gị ntị ga-abụ
Ihe na-esonụ bụ ihe kachasị mkpa iji cheta: gụnyere ngwaahịa, ọrụ, ahụmịhe na ịzụ ahịa, kwesịrị ịgagharị gburugburu ahịa. Ịkọwapụta ndị na-ege ntị na-enyere gị aka ịmepụta ihe na-atọ ụtọ ọdịnaya na isiokwu dị mkpa nke kwesiri ịkwado onye ahịa gị.
Ọchịchị ọlaedo: ọ bụrụ na ị ghọtara mkpali nke ndị na-ege gị ntị, enwere ohere dị iche iche ị ga-enye ọdịnaya dị egwu nke na-enyere aka ịba ụba ego, na-ebuwanye ibu, ma na-eme ka ogologo oge dịgide.
Mkpa Ọdịdị Nlekọta Ọdịnaya
Rịba ama: akụkụ ọ bụla nke ọdịnaya ị na-ebunye kwesịrị inwe ihe kpatara ya. Otutu, ebumnuche nke ọdịnaya bụ ịkọwa ihe, ịkụzi na ịzụ ọchị. Debe uche nke uche mgbe ị na-eke usoro atụmatụ.
Nzọụkwụ ọzọ na-achọpụta ọdịnaya maka ọkwa kachasị elu. Ndị ọkachamara nchịkwa nwere ike ikwu na ị na-eji ndụmọdụ ndị a mgbe ịchọta ọdịnaya gị:
Họrọ isiokwu ndị dị mma ma dị mkpa nke na-adabere na ọdịmma, àgwà, na demographics;
Jikọta isiokwu ziri ezi;
Kwalite ọdịnaya gị maka ngwaọrụ mkpanaka.
Aro ọzọ bụ itinye uche na àgwà, ọ bụghị ọtụtụ. Cheta, inwekwu ọdịnaya apụtaghị ka ọdịnaya dị mma. O doro anya na ndị mmadụ chọrọ iwepụ ọdịnaya bara uru nke dị mkpa, dị mkpa, ma nyere ha aka.
Nyochaa Nsonaazụ Gị maka ịrụ ọrụ nke ọma
Dị ka ha na-ekwu, a gaghị enwe ike ịme ihe a na-atụghị anya. N'ụzọ dị mma, ụbọchị ndị a, ị nwere ike ịchọta ROI site na nsụgharị metrics na ịnweta ihe ọmụma ntanetịime na ihe dị nnọọ ole na ole clicks.
Ị nwere ike ịmụta site na mgbasa ozi ọ bụla, ma ọ mezuru ma ọ bụ mebie ihe mgbaru ọsọ ya. Nyocha na nlekota oru nyere gi aka ikpebi ihe mere ihe kacha mma i nwere. Site na ime nke a, i nwere ike igbanwe usoro ndi ahu nke oma, si otú meziwanye usoro mbu ahia SEO maka mma.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ijikọta SEO na ahịa ahịa bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ka okporo ụzọ gị na-abanye ma na-adọta akwa edu Source . Soro ụzọ ndị e kwuru n'elu ma hụ ihe na-eme gị website rankings!